Mazino Akapfava | Optismile Yepamberi Dentistry muCape Town
Inobata Mazino Kurapa
Zino rakaomarara harisi nguva dzose dambudziko hombe uye rinogona kungove rinobva kune rekudya acid rinokanganisa chingamu mutsara. PaOptiSmile, iwe unozodzidza kuti izvi zvinogona kurapwa nyore nekuchinja nzira yaunodya kana kunwa zvimwe zvinhu uye nekushandisa yakakosha mushonga wemazino.
Kana zino rako richirwadza kwemasekondi makumi matatu kana kudarika kana uchinwa chinhu chinodziya kana kudya ice-kirimu, zvinokwanisika kuti une gomba kana kutsemuka muzino. Izvi zvinogona kudzikira kana zvikasatarisirwa ipapo.
Chii chinonzi Kushushikana Kwemeno?
Chikamu chemazino ako chiri pamusoro pegumline, chakafukidzwa neyakafukidza enamel inodzivirira, nepo midzi iri pazasi pegumline yako ichichengetedzwa nechinhu chinonzi cementum. Pazasi peiyo enamel uye cementum mune dentin, iri diki pane yekudzivirira. Iyo dentin ine microscopic migero inonzi dentin tubules, uye kana enamel kana cementum inopera kana kukuvara, inofumura iyo dentin. Kana matadza ako achidzikira nekufumura iyo dentin, matubules anotendera kuyerera kwemvura mukati mawo uye anokanganiswa nekupisa uye kutonhora kana zvichigona kukonzera tsinga dziri muzino kuti dzive nekunzwa nekurwadziwa.
Chii Chinokonzera Iyo?
Nei enamel kana cementum ichipera?
Kudya zvakawandisa acidic chikafu kana zvinwiwa
Kukwesha mazino ako zvine hukasha
Kunyanyisa kushandisa zvimwe zvinogadzira zino
> Zvisinei, nemeno akaomarara zvakanyanya, izvo zvinokonzeresa zvakanyanya ndeaya anofumura dentin yakawanda, se:
Mazino akavhunika kana kutsemuka
Nekuti mazino akaomarara zvakanyanya anowanzo kukonzerwa nedambudziko remazino rakaomarara, zvakakosha kuti upinde muOptiSmile uye uve nenyaya inobatwa yakanangana nechigaro. Izvi zvinogona kusanganisira korona, kuzadza kana veneers, zvinoenderana nedambudziko. Kana iwe uine chirwere chegum chakapfuurira mberi kusvika padanho repamberi, iwe uchazoda izvi kurapwa zvakare. Kana iwe uchinge warasa chingamu tishu kubva pamudzi, yekuvhiya gamu kubatanidza kunogona kukurudzirwa kufukidza iyo midzi saka ivo vanodzivirirwa zvakare. Kana iwe uchiramba uine hukasha uye hwakasimba, x-ray inofanirwa kutorwa kuti uone kana mudzi canal ingave iri nyaya, iyo inobvisa tsinga saka haisisipo kuti ikurwadzise.
Matipi Ekubatsira Zino Kunzwisisa
Idya chikafu chepamusoro-fiber - senge michero mitsva nemiriwo yakaita bhinzi uye kabichi - izvo zvinobatsira kugadzira mate uye kudzivirira kubva kunzwisisika.
Stock pamusoro pecalcium-yakapfuma chikafu - semukaka uye chizi - kubatsira kuvakazve mazino enamel uye kudzikisa iyo acid chikamu - iyo pH nhanho - yemuromo wako.
Inwa mvura, kazhinji, uye edza kutora angangoita magirazi masere pazuva kuti ubatsire kusuka chikafu acid uye plaque.
Hazvishamise kuti iwe unofanirwa kudzivirira chikafu chinopisa uye chinotonhora, izvo zvinogona kukonzera kunzwisisika kwezino. Asi iwe unofanirwa zvakare kudzivirira chikafu chinotapira uye chikafu chine acidic, senge muto wemichero, zvinwiwa, maswiti anovava, zvinwiwa zvemitambo, doro, uye mapundu - ehe, magaka! Iwo maacids mune izvi zvekudya, pamwe neshuga inoshanduka kuva maasidhi mumuromo mako, inokanganisa zino rako enamel uye kuita kuti kunzwisisika kuwedzere.